एप्पलले माइक्रोसफ्टबाट नोट लिइरहेको छ? | Martech Zone
मङ्गलबार, जुन 3, 2008 आइतबार, अगस्त 23, 2009 Douglas Karr
यो हरेक हप्ता देखिन्छ कि म भिस्टाको लागि अर्को सेवा अपडेट डाउनलोड गर्दैछु। भर्खरै, भिस्टासँग एकै दिनमा सेवा प्याक थियो कि एप्पलले ओएस एक्स लेपर्डको लागि १०..10.5.3. update अपडेट गरे। लेउपार्डमा अद्यावधिक भएदेखि, म ब्राउजर प्रयोग गरेर धेरै समस्याहरू गर्दै आएको छु ... चाहे यो सफारी वा फायरफक्स हो।
आज मैले सफारीलाई फेरि स्थापना गर्ने निर्णय गरेँ कि म यसलाई एकपटक र सबैको लागि ठीक गर्न सक्दिन भनेर। जब मैले स्थापना सुरु गरें, मलाई यो भेटियो।
त्यसोभए उनीहरूले अपग्रेड गरे तर यसको सफ्टवेयर स्थापना अपडेट गर्न बेवास्ता गरे? ओह प्रिय एप्पल, सायद तपाई सानो हुनु पर्छ। विडम्बना भनेको यो हो कि मँ म्याकबुक प्रोमा समानान्तरमा फायरफक्स प्रयोग गर्दैछु अब चाँडै नेट सर्फ गर्नका लागि।
टैग: क्रिसमस कार्डइकमर्सछुट्टी इन्फोग्राफिकमोबाइल संस्करणहरूसामाजिक बुकमार्कहरूट्याब्लेट रूपान्तरण दरWordPress प्रशासक
त्यहाँ प्रशस्त कोठा छ ...
जुन 3, 2008 मा 9: 51 PM
मलाई पनि त्यस्तै समस्या भयो। मलाई थाहा दिनुहोस् यदि तपाईं यसको लागि निश्चित प्राप्त गर्नुभयो!
भन्नु पर्दैन, मैले मेरो पीसी धेरै प्रयोग गरिरहेको छु। मैले वास्तवमै केवल म्याकको लागि प्रयोग गरें यो जे भए पनि ... डिजाइन उद्देश्यका लागि राम्रो छ।
जुन 4, 2008 मा 9: 21 PM
मैले एउटा अनुप्रयोग पाएँ जुन विरोधाभासपूर्ण देखिन्थ्यो र त्यो हो अर्बिक्युलको अण्डरकभर। मैले उनीहरूको समर्थन लेखेको थिएँ र पूर्ण अनुप्रयोग हटाईएको थिएँ र मैले अझ राम्रो गरिरहेको छु। यो ज्यादै खराब छ, म तिनीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछु जुन उनीहरूको अनुप्रयोगले प्रदान गर्छ। मैले तिनीहरूलाई यो लेखिएकोमा लेख्न भनेँ।
मलाई अझै लाग्छ उनीहरू केहि थप मुद्दाहरू हुन सक्छन्, तर यो प्रमुख थियो।